Zava-dehibe ny lalamby any Torkia | RayHaber
[05 / 12 / 2019] Rehefa metro Projects Zava-misy ao Torkia	16 Bursa
[05 / 12 / 2019] Ny ben'ny tanàna Altay dia nanao fanambaràna momba ny Konya Metro sy fampiasam-bola hafa	42 Konya
[05 / 12 / 2019] Haydarpaşa Fiaran-dalamby fijery anatiny nijery teo aloha	34 Istanbul
[05 / 12 / 2019] Tsy misy dingana averina ao amin'ny tetikasa Kartepe Cable Car	41 Kocaeli
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Zava-dehibe ny lalamby any Torkia
11 / 11 / 2019 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, SARINTANY, Headline, TORKIA
Fa maninona no misy lalamby
Zava-dehibe ny lalamby for Torkia; Izy no singa voalohany sy manan-danja indrindra amin'ny fomba fitateram-bahoaka, izay mitombo ny lanjany amin'ny resaka rafi-pitaterana. Io no dinam-paritry ny fampifangaroana sy fampandrosoana ara-toekarena. Tena mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena, sosialy ary kolontsaina amin'ireo toerana nolalovany. Ara-toekarena, manome fitaovam-pitaterana lafo vidy kokoa amin'ny entana mavesatra sy mavesatra. Izany dia ahafahan'ireo mpandeha maro ho entin'ny sarety amin'ny fotoana iray ary mahomby. Amin'izao tontolo izao ankehitriny, izay ahazoana lanja hafa ny fitadiavana angovo mety dia izy io no voalohany indrindra amin'ny maha-izy azy.
Io dia safidy iray amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana an-dalambe miaraka amin'ny fampielezana ny tambajotra High Speed ​​Train. Ny lalana vy, izay mampifandray an'i Eoropa sy Azia amin'ny fomba manintona indrindra, mampitombo ny fahafahantsika amin'ny fitaterana ara-barotra satria handalo ny firenentsika izany noho ny toerana misy azy ireo. Izy io dia manome lalana ny fampandrosoana ny sehatry ny logistics. Mampitombo ny haingam-pandeha, fahaiza-manao ary ny fahafahan'ny famokarana indostrialy amin'ny fanamorana ny fidirana amin'ny foibe lozika.
19, iray amin'ireo zavatra noforonina izay nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fandehan'ny tantara. Ny lamasinina sy lalamby, izay lasa ara-barotra tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taonjato; manova sy manova ny indostria, varotra ary ny kolontsaina; ny zava-kanto, literatiora, fohifohy dia faritra izay misy fiantraikany saika ny zavatra rehetra sy ny zava-drehetra izay mahaliana ny zanak'olombelona.
Ireo lokomototra izay nanomboka ny dian'izy ireo tamin'ny lalamby vy no mpilalao voalohany amin'ny fanovana sy ny fampifangaroana. Ho fanampin'ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fampiasam-bolan'ny gara dia mampitombo ny maha-zava-dehibe azy mba hahazoana antoka ny fampidirana miaraka amin'ny fampandrosoana ara-tsiansa, sosialy ary kolontsaina. lalamby; mampiditra ny fiainana maoderina amin'ny faritra rehetra iainany. Ny fiantraikany lehibe indrindra amin'ny lalamby amin'ny fanaterana ny serivisy ho an'ny daholobe dia nahatonga ny fitomboan'ny dingana natao hanatsarana ny kalitaon'ny olona.
Ny fampandrosoana ara-teknika sy ara-tsiansa dia nanakaiky ny firenena kokoa noho ny teo aloha. Mba hamenoana ny fanatontoloana sy fampidirana politika ary sosialy dia noforonina ny filàna fampidirana ireo fomba fitaterana. Ny maha zava-dehibe ny lalamby an-dàlana dia azo lazaina tsara kokoa. Ny antony lehibe amin'ny fampiasam-bola amin'ny lalamby, indrindra any amin'ny Vondrona eoropeana sy ny firenena Atsinanana dia tsy mijanona. Takatry ny telopolo taona lasa izay fa tsy misy dikany ny maha-zava-dehibe ny fitaterana an-dàlana, izay no fomba fahita indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Ny minisiteranay dia nahita lalamby ho iray amin'ireo rohy manan-danja indrindra amin'ny hetsika fampandrosoana maharitra ary niasa mafy mba hamelomana indray ity sehatra tsy miraharaha ity hatramin'ny 1951 ka hatramin'ny faran'ny 2003. Ny elanelana lalina eo anelanelan'ny taona 18-945, izay nanamboarana ny lalamby 1951 kilometatra tamin'ny taona fa ny kilometatra 2004 fotsiny dia nofenoina ny alimanaky ny hetsika isan-taona 16 farany sy ny fandinihana faran'izay matanjaka rehefa vita ny 1856-1923, 1923-1950, 1951-2003 efa.
Ny lalamby anay dia nahazo tombony tamin'ny fanovana ny hevitra momba ny fampandrosoana mahay mandanjalanja ary mitambatra amin'ny fomba fitaterana rehetra ho lasa laharam-pahamehana. Ny maha-zava-dehibe omena ny lalamby dia naseho tamin'ny drafitry ny fampiasam-bola mba hahatratrarana ireo tanjona voafaritra ary nitombo be ny fidiram-bola isan-taona isan-taona. Fiaran-dalamby, ao anatin'ireo sehatra an'ny Repoblika 2023 no kendrena
100. dia miomana hamoaka ny marika ao amin'ny rafi-pitaterana.
●( Fametrahana tetikasa haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha sy haingam-pandeha
●papa ny fanavaozana ny làlana efa misy, ny fiaramanidina fiara, ny gara sy ny gara,
● Fifandraisana amin'ny tambajotra lalamby mankany amin'ireo foibe famokarana sy seranan-tsambo,
● fampandrosoana ny indostrian'ny lalamby mandroso amin'ny sehatra tsy miankina,
●( Ny fanaovana ny firenentsika ho fototry ny logistika manan-danja any amin'ny faritra, indrindra amin'ireo foibe lozika no andrasana hanome fahafahana lehibe amin'ny fanondranana,
●( Lalana Iron Silk Modern, izay hanitatra avy any Azia Farany ka hatrany Eoropa Andrefana, natsangana ary misy lalamby lalamby mitohy eo anelanelan'ny kaontinanta roa,
●( Miaraka amin'ireo indostrian'ny lalamby vaovao amin'ny sehatry ny sehatra, tetikasa marobe lehibe no natao tamim-pahombiazana mifanaraka amin'ny tanjona voalohany amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny lalamby an-trano, ary maro no niasa tamim-pahavitrihana.
Tiorkia lalamby haingam-pandeha tetikasa 40-taona nofin'i tanteraka. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ary Konya-Eskişehir-İstanbul Fiara lehibe haingam-pandeha dia vita sy ampidirina am-panompoana. 8 an'izao tontolo izao miaraka amina lalamby haingam-pandeha ambony, 6 any Eropa. miakatra ho amin'ny toeran'ny firenena ankehitriny nanomboka vanim-potoana vaovao any Torkia. Ny zotra Railway High Ankara-Sivas dia eo amin'ny faran'ny 2019; Ny faritra Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak ao amin'ny tsipika Ankara-İzmir High Speed ​​Railway, izay eo am-panaovana asa mavitrika, dia mikasa ny ho vita amin'ny 2020, Uşak-Manisa-İzmir ao amin'ny 2021 sy Ankara-Bursa tsipika amin'ny 2020.
Miaraka amin'ny lalamby Baku-Tbilisi-Kars sy Marmaray / Bosphorus Tube Passage, dia ampiharina ny Lalana Iron Silk maoderina, ary ny lalamby lalamby any Azia-Andrefana manara-penitra.
Marmaray 2013, izay naorina niaraka tamin'ny teknikan'ny tonelina fantsona lalina indrindra eran'izao tontolo izao, dia naorina tao amin'ny Bosporus, izay nofinofisantsika zato taona sy tapany.
Ho fanampin'ny fanamboarana lalamby vaovao, nomena lanjany ny fanavaozana ny rafitra efa misy ary natomboka ny fanentanana ny fanamboaran-dàlana. Ny fikojakojana tanteraka sy fanavaozana ny 10.789 km ny tamba-jotra misy ny lalamby efa misy, izay tsy nivadika hatry ny andro nananganana azy io dia efa vita. Araka izany, ny fitomboan'ny hafainganam-pandeha, ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao, ny fitateram-bahoaka sy ny fitaterana entana dia lasa mahazo aina kokoa, azo antoka kokoa ary haingana kokoa ary nitombo ny ampahan'ny lalamby amin'ny fitaterana.
Ny laharam-pahamehana dia nomena ny fampifandraisana ireo ivon-toeram-pamokarana, zotra indostrialy nokarakaraina tamin'ny lalamby sy ho amin'ny fampandrosoana ny fitambaran'ireo fitaterana iraisana. Amin'ny alàlan'ny famolavolana ivotoerana lozika ho an'ny OIZ, orinasa sy seranan-tsambo izay misy ny laharam-pahamehana lozika amin'ny firenentsika ary amin'ny fananganana ny sasany amin'ireo; Hevitra vaovao momba ny fitaterana dia novolavolaina amin'ny lafiny fitateram-pirenena, eo amin'ny faritra ary erantany.
65. Program'ny governemanta sy 10. Manomboka ny ezaka ho an'ny fanatanterahana ny fanodinana ny tan avy amin'ny Program transport to logistics yer tafiditra ao amin'ny Drafitry ny fampandrosoana. Ny programa dia mikendry ny hampitombo ny anjara biriky ny sehatry ny logistic ho amin'ny fitomboan'ny firenentsika ary hahatonga ny firenentsika ho iray amin'ireo firenena 15 voalohany ao amin'ny Logistic Performance Index.
Ny lalàna mifehy ny sehatry ny lalamby dia navoaka, nomena fotodrafitrasa liberalisation tamina sehatra sy ny lalana ho an'ny sehatra tsy miankina hitana ny fitaterana lalamby. Amin'izany toe-javatra izany dia nifarana ny fizotry ny lalamby amin'ny maha-fotodrafitrasa sy ny fiaran-dalamby.
Teo anelanelan'ny taona 2023-2035 eo amin'ny sehatry ny lalamby
●( Mba hanohanana ny lalamby afovoan'ny Trans-Asia ao amin'ny firenentsika, 1.213 km miala amin'ny 12.915 km mankany 11.497 km, 11.497 km avy any 12.293 km mankany 2023 km, avy any 25.208 km mankany XNUMX km. tratrariny ny halavan'ny lalambe XNUMX km amin'ny XNUMX, ka izany no mampiakatra
●( Famenoana ny fanavaozana ny andalana rehetra,
●( mizara ny fitaterana lalamby; mitombo ny 10 amin'ny mpandeha ary ny 15 mitondra entana,
●( Miantoka fa ny hetsika fitaterana ny sehatry ny gara liberalisma dia tanterahina ao anatin'ny tontolo mifaninana milamina sy maharitra
● resaka Mampitombo ny tamba-jotra mankany 6.000 km amin'ny fanamboarana ny 31.000 km fanampiny lalamby haingam-pandeha ambony kokoa,
● • Fampivoarana ireo fotodrafitrasa fitaterana hendry ary rafitra hiantohana ny fampidirana ny tamba-jotra misy ny rafi-pitaterana hafa,
●papa ny fahavitan'ny lalamby sy fifandraisan-dàlamby manaraka ny Làlan'ny Vitsita sy Golfa ary lasa lalamby lalamby lehibe eo anelanelan'ny kaontinanta Asia-Europe-Africa,
●( Natao hanatratra ny 20% amin'ny fitaterana entana amin'ny lamasinina ary ny 15% amin'ny fitaterana mpandeha.
10. Ny tanjon'ny sehatry ny gara ao amin'ny Drafitra Fampandrosoana dia:
Amin'ny drafi-pitaterana entana dia ilaina ny manamboatra fomba fiasa. Ny fampiharana fitaterana mitambatra dia hovolavolaina amin'ny fitaterana entana. Tambajotra fiaran-dalamby haingam-pandeha, afovoan-tany Ankara;
●( Avy amin'ny fanitsiana Istanbul-Eskişehir-Antalya
Lalamby lalamby misy ankehitriny ho laharam-pahamehana mifototra amin'ny fahatsaran'ny fifamoivoizana
hitoerana avo roa heny.
Haingam-pandeha ny famandrihana fanamafisana sy elektrika takian'ny tambajotra. Ny fanarahan-dalàna amin'ny fifanarahana ara-teknika sy ara-pitantanan-draharaha dia ho azo antoka mba hiantohana ny fitaterana lalamby tsy misy sakana sy mirindra miaraka amin'i Eropa.
Ho vita ny serivisy lalamby sy lalana an-tsambo. 12 logistic center (9 logistics center dia hisokatra ho an'ny serivisy), izay eo am-panamboarana sy ny fanomanana tetikasa dia vita.
Ao Torkia, vao voalohany no nisy fitaovana drafitra tompony dia efa voaomana. Misy lalàna lojika feno fiomanana amin'ny fikomiana. Mitohy amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka ny ezaka mankany amin'ny tanjon'ny drafi-pampandrosoana
Vorontsiloza Railway Map
Izmir ao Torkia-potoana Shina Fifandraisana
Der Spiegel: "Avy any Torkia any Alemaina ny lalamby ...
Syria, Torkia sy Irak lalamby amin'ny sisintany ...
Torkia, lalamby intsony mpanapa-kevitra ao amin'ny League Firenena
DP World Antsasaky ny lalamby any Torkia ...
Historical Development ny lalamby ny amin'izao fotoana izao ao Torkia
Nanomboka tany Kocaeli ny Era Card Card
Manisa Card Card dia manomboka amin'ny fitaterana
Famindrana ny vanim-potoana any Bursaray miaraka amin'ny Tetikasa Kent Square…
Ny vanim-potoanan'ny tetik'ady maharitra amin'ny lojistik
Ny vanim-potoan'ny bibliothérique mahazaka ao Şanlıurfa
TCDD 2018 Period 2. Navoaka ny fampahafantarana ny Railway Network
'Mialà amin'ny fiarakodia' ao Aytemiz
Çağır Gelsin tany Istanbul T İTAKSİ İstanbul Period
Centerambaşı Ski Center miaraka amin'ny Glass Roof Holiday Village haorina
Ny Direction Générale de làlambe dia nandefa fiara vaovao
Ny fiara fitaterana ao Sakarya dia voapoizina ny fitaterana salama
Era vaovao ao Sakarya Kart54 Kiosks
Namboarina ny fefiloha Bursa ao Bursa
Rehefa metro Projects Zava-misy ao Torkia
Lehibe Opportunity E-Bike Bisikileta Industry ao Torkia
Atolotry ny mpamily ..! Anadolu Lalamby 5-20 hikatona amin'ny volana Desambra